Ndeapi matanho ekubudirira Engine Engine Optimization Ndinofanira Kuwana Here?
Kubudirira search injini optimization (kana SEO) inoda ruzivo ruzivo rwekushandurwa kwegorongwa hwegorgorithm iyoGoogle inosvika pamwe chete nguva dzose. Nhengo imwe neimwe yeOO inofanirwa kuva nekwanisi yekusiyanisa imwe yenzira gumi dziripo dzinoshandiswa kuti dzibudirire chinangwa chikuru pakuguma kweSeO campaign. Idzi ruzivo ruchakubatsira iwe kuva nani pakusarudza matanho api aunofanira kuita kuitira SEO inoshanda.
Muchikamu chemazuva ano, Semalt nyanzvi achakuudza pamusoro penzira dzakanakisisa yekutsvaga injini yekugadzirisa inoshanda muna 2017. Verenga pamusoro pekuziva vose. Saka, ngatitange.
Nhanhatu Dzakashandiswa SEO Makomethodhe Unogona Kushandisa Iye Zvino
1. Tarisa pa Latent Semantic Indexing
Latent Semantic Indexing, inozivikanwawo seLSI, inozivikanwa seSeO nzira iyo yose ine chokuita nekugadzirisa ukama pakati pemagariro nemashoko ari mukati. Inobatsira Google nedzimwe injini dzekutsvaga kusiyanisa zvinoreva zvakawanda zvemamwe mazwi nemitsara.
Zvinyorwa zvese, LSI inotarisa zvinyorwa zvitsanangudzo zvine chokuita nemashoko ekutsvaga pawebhu.
Kunyange zvazvo LSI yakashandiswa makore makumi maviri apfuura, tsika iyi inobatsira nhasi SEO yanhasi. LSI keywords vari nani pakunatsiridza Google huwandu hwemaji enyu ewebhu. Zvakare, zvinowedzera kuvepo kuti nzvimbo yako yekushandisa ichagara kwenguva refu muSERP pamwe nekuchengetedza nzvimbo yako kubva pachirango.
2. Nzvimbo Dzakakosha mumusoro-soro
Iyi inobatsira zvikuru pane zviri nani SEO zvinyorwa, kunyange zvazvo zvakatanga kuziviswa mumakore ekuma 90. Vazhinji veZOO nyanzvi dzinokurudzira kuisa urongwa uhwu mumabasa ako zuva nezuva SEO mabasa kubva kutsvaga injini kutarisira misoro yekuisa zvinyorwa zvemashoko makuru epeji.
Kwemakore, chete mazita ekutumira mazita ku SEO ave H1 neH2. Zvinhu zvakashanduka munguva. Mazuva ano, pane mavara matanhatu, kubva paH1 kusvika kuH6 - chimwe nechimwe chinoreva kuderera kukosha. H1 ndechimwe chekukosha kwazvo, chinofanira kungoshandiswa kamwe kamwe neji peji, inowanzova iyo musoro wepasiti. Nhengo imwe neimwe inotevera inotungamira inofanira kushandiswa sechikamu chechimwe chepamusoro.
3. Funga Kubatanidza Nezviremera Zvemasimba
Hapana kumira. Mamashoko akajeka, hukama hunoputika ndeyekubatanidza kunotaura kune imwe nzvimbo kubva pawebsite yako. Kubatanidza kune zviremera zvemasimba kunobatsira Google kunzwisisa niche yako uyewo kuwedzera hutano hwewebsite yako, iyo inonyanya kuita basa muSeO yako yepaiti.
Kubatanidza kune zviremera masero ndeimwe yenzira dzakanakisisa dzokuva nehukama hwebhizimisi nemabhizimusi ekuIndaneti ane niche imwe chete.
Kuita kuti SEO yako ibudirire haisi yakaoma sezvinogona kuonekwa pakutanga. Kuteerera kune mazano ataurwa pamusoro apa kuchakubatsira iwe kugadzira zviri nani SEO zano pane iwe wauri kushandisa iye zvino.
Kana iwe uine mibvunzo kana uchida kugovera maitiro ako eSOO anoshanda nesu, usanyara kutaura neSimalt team yedu Source . Tinoda kunzwa kubva kuvaverengi vedu!